Ekipanay - SmartMe
Dom » Ny ekipanay
Ny lehiben'ny mpanamory. Izy no manamboatra lisitra asa, kalandrie hetsika ary mandrindra ny asan'ny ekipan'ny tonian-dahatsoratra, ary miresaka amin'ireo mpamokatra. Madzia no tompon'andraikitra amin'ny horonan-tsarimihetsika rehetra azonao jerena amin'ny onjam-peo! Tiany sy amboariny izy ireo 🙂 Tianao ve ny sary ao amin'ny Instagram sy Pinterest? Izany koa izy io. Tiany rehefa voalamina ny zava-drehetra, izay manampy antsika hahay handresy ny korontana amin'ny fahendrena. Mpifindra mafana fo sy mpankafy ny mari-pana mihoatra ny 30 degre. Orkestra vehivavy!
Hatreto dia ilay adala be saina indrindra ao amin'ny SmartMe. Mahafantatra sy mankafy ny media sosialy izy ary afaka mivezivezy tsara amin'izy ireo koa. Manara-maso ny Instagram sy ny Pinterest izy. Misaotra azy, azonao atao ny mahita ny mety ho teknolojia tsara tarehy sy ny mety ho asan'ny asantsika avy any an-dakozia. Raha tsy nisy izany dia tsy ho maro loko i SmartMe. Ho fanampin'izay, mamorona dikanteny ho an'ireo lahatsarinay YouTube izy ary manoratra vaovao. Ilay orkesitra vavy!
Mahaliana amin'ny teknolojia vaovao, izay tsy manam-pahataperana ny heviny! Hitan'izy ireo tsy tapaka ireo fitaovana vaovao hosedraina, mamolavola vahaolana marani-tsaina ary manangana azy manokana. Lehilahy orkesitra izay mandihy tsara koa! PS Nahita ny fomba fifandraisana tamin'ny famantaranandro fanairana sinoa izy, koa manaja 😉
Filologianina poloney iray mamonjy ny aintsika! Tsy misy typo azo takona aminy, ary ny fehezanteny rehetra ao amin'ny tranonkala dia tsy maintsy mandalo ny fitsapana mafy. Tiany ny mandeha sy mandeha an-tendrombohitra.
Nilaza izy ireo fa natombok'i Daniel tamin'ny teknolojia vaovao tao anaty fandrian-jaza i Daniel ary toa misy ifandraisany amin'izany. Hatramin'ny 16:00 hariva, programmer iray hajaina, arahin'ny tonian-dahatsoratra, tsy misy indrafo amin'izay rehetra mody hendry. Tiany ny dia lavitra sy kely.
Fahaiza-misaina. Szymon dia tompon'andraikitra amin'ny lamosin'ny tranokalanay. Rehefa misy tsy mandeha dia fantany ny antony ary azony atao ny manamboatra azy! Ataony azo antoka fa azo antoka, haingana ny tranokala ary manaitra anao foana amin'ny vokatra vaovao. Mandray anjara amin'ny runmagedons sy ny lalao board. Tiany ny milamin-tsaina.
Olona tsara manafina tsiambaratelo mihoatra ny iray 😉 Tiany ny Google Home sy izay rehetra azo ifandraisany. Tsy matahotra ny hilaza ny heviny izy. Ny tanjony dia ny famolavolana trano marani-tsaina mba tsy hahitana azy. Faly aho fa mandinika ny vokatra sy ny fakantsary Smart Home, ohatra ny fakan-tsarin'ny fiara.
Mpanao gazety araka ny fientanam-po sy ny asa, ny mpanao gazety amin'ny fitiavana. Paweł dia tonian-dahatsoratra nandritra ny taona maro, ary ny tantara no fitiavany hatramin'ny fahazazany. Ny fijeriny tsara fa mampihomehy ny zava-misy dia nafindra kely amin'ny endrika tsanganana. Amin'ny lafiny teknolojia, fa tsy izany ihany, Paweł dia hizara ny eritreriny ao amin'ny SmartMe isaky ny alahady.
Mama Mama 😉 Reny manan-tarehy telo izy. Ankasitrahany ny fotoana laniny miaraka amin'ny fianakaviany, ka izay no antony itadiavany gadget tsy manam-paharoa hanamora ny fiainana. Nizaha fitaovana an-jatony izy mba hisafidianana izay tsara indrindra. Ao amin'ny SmartMe dia faly izy manampy ny ray aman-dreny tanora sy antitra! Ankoatry ny fotoana laniny amin'ny ankizy sy amin'ny SmartMe dia psikology klinika izy miasa 😉
Ny fahitana lehibe an'ny SmartMe. Manoratra tononkira mahafinaritra izy ary mikapoka foana ny hoho amin'ny lohany. Afaka manombatombana ireo fitaovana marani-tsaina amin'ny lafiny hafa tanteraka izy ary manana fomba fijery vaovao momba ny zava-drehetra. Ho hitanao fa mahaliana foana ny vaovaony ary manome toky izahay fa hamaky azy ireo amin'ny fahafinaretana lehibe ianao! Ary vao fanombohana ihany izany. Impiry impiry no hahagaga antsika? Tsy afaka miandry ny tenantsika isika!
Ao anaty rany ny elektronika! Izy dia tonian-dahatsoratra sy mpamorona ao amin'ny SmartMe miasa ao amin'ny faritra Home Assistant. Matetika izy no tia manangana vahaolana ho azy ary mampivelatra ny fitiavany trano mahira-tsaina. Amin'ny fotoana malalaka ananany dia tiany ny maka sary ary tianay ny mandefa azy ireo 🙂
Soavaly mainty SmartMe. Namorona SmartMe i Ania. Nanangana ny zavatra hitanao tao amin'ny tranokala izy, noho izany ho an'ny famolavolana sary, famolavolana - ny zava-drehetra manomboka amin'ny sary famantarana ka hatramin'ny endritsoratra Toa an'i Czaki, tiany ny mianika tampon-tampon'ny tendrombohitra tsirairay. Ity koa dia manao gilasy mamirapiratra.
Ny ankamaroantsika dia misy rà ao amin'ny lalan-drantsika, saingy misy ny sasany misy herinaratra. Izay no maha Rummy azy. Raim-pianakaviana fakan-tahaka amin'ny antoandro, fa raha vao milentika ny masoandro dia mamoaka fitaovana Fibaro izy ary mijery izay zavatra hafa azo atao amin'izy ireo! Mpamolavola sy tonian-dahatsoratry ny SmartMe
Inspecteur hajaina amin'ny andro, ary lehilahy an-tendrombohitra amin'ny alina. Ao amin'ny SmartMe, izy no tompon'andraikitra amin'ny fanadihadihana Foto / Video / Audio ary miara-mamorona horonantsary sy sary ho hitanao amin'ny sary famantarana anay. Nahazo ny asany fakana sary sy sarimihetsika izy teo an-tampon'ny Andes, Tatra Mountains ary ny zavatra hafa rehetra izay mahatratra 4 metatra ny haavony. Tiany Skoda (efa nanana roa izy, ary mbola mitempo ny metatra).
Izao tontolo izao - Smart
AZONAO IZAO FANONTANIANA
Manorata aminay, dia ho faly manampy izahay!